हुन्छ त शैलुङ कन्सट्रक्सनलाई कारबाही ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ असार २०७६, बिहीबार १२:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । सरकारले ‘क’ वर्गको शैलुङ कन्सट्रक्सनलाई कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सङ्केत देखाएको छ । विभिन्न ठाउँमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने यस कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्न लागेको हो
कम्पनीले कमलविनायकबाट भत्केकोपाटी हुँदै नगरकोट जाने सडकको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको छ । कम्पनीलाई सडक विभाग अन्तरगतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले जरिवाना तिराउने तयारी थालेको बुझिएको छ । सडक निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती र लापरवाही गरिएको भेटिएपछि शैलुङलाई ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात झण्डै ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्न लागेको बताइएको छ ।
कमलविनायकबाट भत्केकोपाटी हुँदै नगरकोट जाने १६ किलोमिटर सडकको काम सम्झौताअनुसार ०७३ को जेठसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । शैलुङले यो सडक निर्माणको काम २०७१ को जेठबाट सुरु गरेको हो । आयोजनामा अहिलेसम्म ४ पटक म्याद थप गरिसकेको छ ।
यो सडक भारतीय एक्जिम बैंकको ३० करोड लगानीमा निर्माण गरिन लागेको हो । तर निमाृण कम्पनी शैलुङले ‘लो बिड’ गरेर ठेक्का हात पार्ने र मोबिलाइजेसन हात पारेपछि आयोजनाहरु वर्षौसम्म अलपत्र अवस्थामा राख्ने गर्दै आएको छ । सरकारलाई घाटा हुने काम गरेपनि सरकारले शैलुङजस्ता निर्माण कम्पनीलाई ‘ब्ल्याक लिष्ट’ मा राख्नुपर्ने पूर्बाधारविद्को तर्क छ । उनिहरुले राज्यको कमजोरीका कारण ठेकेदारहरुले मुलुकको पूर्बाधार क्षेत्रमा राज जमाएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन ।
वैकल्पिक ऊर्जाको निकम्पापनले दुई अर्ब अनुदान फिर्ता
काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्ध्दन केन्द्रसंग कैयन कार्यक्रमहरुको पोको छ । तर, केन्द्र स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि…
‘पिक आवर’मा काठमाडौंका कुन सडकमा कति गाडी गुड्छन् ?
काठमाडौं–बढ्दो सवारी चापका कारण राजधानीका अधिकांश स्थानमा लामो समय ट्राफिक जाम पर्छ । ‘पिक आवर’ मा जाम हुने मुख्य…
काठमाडौँ । सरकारले रु २५ अर्बमाथि लगानीका आयोजनालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउने गरी नयाँ कानूनको प्रस्ताव गरेको छ ।…
गुडिरहेको ट्रकबाट खसेर मृत्यु
झापा । झापामा ट्रकबाट खसेर एक जनाको ज्यान गएकाे छ ।
दमक नगरपालिका–१ का कमल तामाङ गौरादह नगरपालिका–१ स्थित सडकखण्डमा…
स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनासम्म पनि तलबभत्ता पाएनन्
सिञ्जा । जुम्लाका सात स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता भुक्तानीका लागि पहल गरिदिन माग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत…